Ihe a ga -eme ụmụaka aka ike | Ndị Nne Taa
Ihe a ga -eme ụmụaka aka ike
Alicia tomero | 27/09/2021 10:00 | Ịmụ ihe, Atụmatụ, Mmepe, Ezinụlọ
Ọtụtụ ndị nne na nna enweghị ike idozi mgbe ụmụ ha chere ihu njide onwe onye n'ebe nne na nna ha nọ. Site na afọ isii bụ mgbe ụfọdụ ụmụaka mgbe malite ịnọgide na -enwe àgwà na -enweghị isiHa bụ ndị ụgha, ndị na -anaghị eme ihe ọsọ ọsọ ma nwee nka maka ịbọ ọbọ. N'ịche ihe ịtụnanya a, anyị ga -amatarịrị ihe a ga -eme ụmụaka aka ike.
Ọ nweghị ụzọ ka mma karịa iji ịhụnanya anyị niile akụzi ihe, n'echefughị ntachi obi anyị na ikike anyị. Ọ bụrụ na anyị ekwe ka akara nke ọchịchị aka ike na -enye onwe ha mgbe ha dị obere, ka afọ na -aga ọ bụ ihe siri ike ịchịkwa. Nwa nwoke ma ọ bụ nwa agbọghọ dị afọ iri na ise esirila ike karịa ijikwa n'ihi nnupụisi ha na ọdịdị dị mgbagwoju anya ha ga -edozi.
1 Gịnị bụ nwa aka ike?
2 Kedu ka anyị ga -esi na -emeso ụmụaka aka ike?
Gịnị bụ nwa aka ike?
Ụmụaka na -emecha weta ikike na ike omume ha n'ihu nne na nna ha. Ha na -ejikwa ntakịrị aghụghọ na -apụ ma na n'ikpeazụ, ọ nwere ike mepụta akparamagwa dị njọ. A na -akpọ ụzọ ha si ejikwa mepụta ike nne na nna 'Ọrịa eze ukwu'.
Mkparịta ụka ahụ na -aga n'ihu, na -eti mkpu na oke iwe. Ha nwere ike imerụ nne na nna ha oke n'ụzọ anụ ahụ na n'uche ha anaghị anabata omume ha. Ha bụ ndị aghụghọ na ndị isi ike, Ha na -enwe ọmịiko na mmetụta nke ndị gbara ha gburugburu, yabụ na ọ naghị agbanwe agbanwe.
Ka oge na -aga, ụmụaka ndị a na -emewanye ihe ike dị ka a na -eme ụmụ okorobia narcissistic, ha na -ahụ ndụ n'ụzọ enweghị isi na ọ bụghị naanị na ezinụlọ, kamakwa mmekọrịta ha. Ha na -abịa ịzụlite obere ndidi maka nkụda mmụọỌ bụrụ na ihe anaghị aga nke ọma ma ọ bụ na ha emezughị ihe mgbaru ọsọ ha, ha na -ewe iwe wee na -eme ihe ike.
Ha nwere ike bụrụ ndị ntorobịa ndị mebie ọnọdụ mmetụta uche ha, n'amaghị ka esi ekwu uche ya. Ha agaghị ewedata onwe ha n'iwu etinyere n'ime ha, ha ga na -ejidekwa onwe ha oge niile jiri obere ùgwù onwe onye.
Kedu ka anyị ga -esi na -emeso ụmụaka aka ike?
Ọ dị mkpa inyocha atụmatụ agụmakwụkwọ a na -akụzi, ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka emezigharị na nke a, ha kwesịrị ma nne na nna kwetara iji mejuputa otu ụdị mmụta ahụ. Ị gaghị achọ onye ikpe mara na ị ga -amalite mepụta ezigbo usoro, ebe nwatakiri ga -erube isi na -enweghi obi abụọ. N'oge a na -eme mgbanwe ma etinyere iwu, a ga -etinyerịrị ha dịka o kwere mee, na -enweghị ihulata ma ọ bụ laa azụ.
N'ezie enwere ọtụtụ mkparịta ụka ebe nwa ahụ achọghị irube isi n'iwu ụfọdụ. Ọ dị mkpa nọrọ jụụ ma enwetaghị. Ọ bụrụ na nwatakịrị tiri mkpu ma ọ bụ kparịa ya, eleghara ya anya na eweghachila otu okwu ahụ. Ihe iyi egwu adịghịkwa mma, ebe ọ bụ na ha na -ebunye nwatakịrị ahụ erughị ala ma na -ebute agọnarị nke ukwuu n'ikpeazụ.
Ị ga -ahapụ nwa ahụ wetuo obi, iwe ọkụ ahụ akwụsị. Na -ahapụghị isiokwu ahụ n'akụkụ, ị ga -abịarute n'ịhụnanya na mee ka ọ nyochaa ọnọdụ ahụ. Ọ dịghị mkpa ịmepụta nnukwu arụmụka n'ihi na ha ejighi okwu mee ihe, mana ee chetara gị iwu enyerela nakwa na ị ga -akwanyere ha ùgwù.
Site na mkparịta ụka dị jụụ Ị nwere ike nyere ụmụ gị aka nke ukwuu, ọ ka mma karịa ịrụ ụka na ịkparịta ụka. Ekwesịrị ka m nyochaa ọnọdụ ahụ, ọ bụ ezi echiche ime ka ọ tụgharịa uche na nsonaazụ na ụdị mmetụta omume ya nwere ike ibute.
A gaghịkwa ahapụ ya iche, ikwe ka nsogbu nwata ahụ dozie n'onwe ya, ha ga -ahụrịrị nkwado anyị niile. Ahụhụ na -aga n'ihu, oke iwe na iwe mgbe niile na -eme ka nwata ahụ nọrọ jụụ na -enwe nrụgide karịa.
Anyị ga -eme ka ọnọdụ a dị jụụ ka oge na -aga na nnukwu ndidi. Na nkenke, ọ bụrụ na nwatakịrị amalitelarị igosi ihe ngosi nke omume mmegbu, ndụmọdụ kacha mma bụ tinye ókè ebe ọ bụ na ha pere mpe, na ọtụtụ, ọtụtụ usoro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndị nne Taa » Mmepe » Ihe a ga -eme ụmụaka aka ike
Easy edozi isi
Ị chọrọ ka gị na nwa gị na -emega ahụ n'ụlọ? Anyị na -atụ aro usoro a